UZIJONGA NJANI IIMOVIE EZIMANGALISAYO NGOLANDELELWANO: UMHLA WOKUKHUTSHWA KUNYE NOKUKHUTSHWA- IRADIO TIMES - IIMUVI
Ungazibukela njani zonke iimovie ezimangalisayo ngokulandelelana: Ixesha lexesha le-MCU kunye nokukhutshwa komyalelo
Ukubukela iimovie ezimangalisayo ngokulandelelana kunokubonakala kungumsebenzi omkhulu ngenxa yokuba kukho iimovie ezingama-23 ze-MCU ngokulandelelana kwazo ukuze usebenze.
Umsebenzi ophambi kwakho unokubonakala unzima, kodwa kulapho singena khona: esi sikhokelo siza kukunika umbono opheleleyo we-MCU ukuza kuthi ga ngoku kunye nemiyalelo eyahlukeneyo yokubukela onokonwabela uthotho lwe-epic. Siza kuchaza indlela yokubukela iifilimu zeMarvel ngolungelelwaniso lomhla wokukhutshwa kunye nocwangco ngokulandelelana kunye nokuyalelwa okungaphantsi kwespaghetti. Icandelo ngalinye liphula umda wexesha le-MCU ngendlela elula yokulandela ukuze ukwazi ukuzinkcinkca umxholo wentliziyo yakho, kwaye ungabandakanya uthotho lweTV Uthotho lweLoki , Wandavision kwaye I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika ixesha elipheleleyo.
Ungabukela yonke imovie yeMarvel kwiDisney Plus ngoku - sayina nge- $ 7.99 ngenyanga okanye nge- $ 79.90 ngonyaka
Ngethamsanqa, akukaze kube lula ukubukela zonke iimovie zeMarvel ngokulandelelana njengeDisney Plus phantse yonke imovie, kwaye bangena nge4k nayo. Kutshanje, iqonga lokusasaza lamkele Umhlolokazi omnyama kulungelelwaniso lwayo lweenkwenkwezi, olufumanekayo ukubukela ekhaya ukongeza Ukufikelela kweNkulumbuso yeDisney Plus umrhumo. I-blockbuster ekudala ilindelwe nguScarlett Johansson iphosa ispani kumda wexesha likaMarvel ngokuthatha ababukeli babuyele kwi-2016 kunye nefestile ekhethekileyo yexesha phakathi kweCaptain America: Imfazwe yamakhaya kunye neAvenger: Imfazwe engapheliyo (funda yethu Uphengululo lomhlolokazi omnyama ngoku ukufumana ukuba besicinga ntoni ngemovie).
Kanye nokuphuma kukaRomanoff, zininzi iifilimu ezintsha zeMarvel ezibekelwe ukukhutshwa kwe-2021 njengoko kubonisiwe kwi I-Marvel Studios ibhiyozela i-trailer, kubandakanya; U-Shang-Chi kunye neMarvel's Ngonaphakade , Indoda yesigcawu: Akukho Ndlela yokuGoduka kunye neBlack Panther: iWakanda Forever (nge-8 kaJulayi, 2022), iMarvels (nge-11 kaNovemba, 2022), i-Ant-Man kunye ne-Wasp: iQuantumania (nge-17 kaFebruwari, 2023) kunye Abagcini beGalaxy: Vol 3 (Nge-5 kaMeyi, 2023). Ayikuko nokubala oko kulindelwe ngokushushu Ugqirha Strange kwi-Multiverse of Madness , Thor: Uthando kunye neNdudumo kunye nokuzalwa ngokutsha kwe- Ezine ezigqibeleleyo .
Ayisiyiyo yonke imiboniso bhanyabhanya nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, sele sibonile uthotho lweebhloko ezintathu zeMarvel ezijoyina ithala leencwadi elikhulu leDisney Plus ngokuguqa kohlobo Umbono weWandaVision, ixakekile I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika kunye no-Loki ongumqondo ophakamileyo, osandula ukugqiba (jonga ukwahlulwa komhlathi Ukuphela kukaLoki ngeenkcukacha) -lixa UNksk Marvel kwaye Hawkeye nabo basendleleni. Sikwanayo ne-She-Hulk, iNyanga Knight, iiMfazwe zoMkhosi, i-Ironheart kunye noThunyelo lweMfihlo konke okusendleleni.
Ngolwazi oluthe kratya kuzo zonke iiprojekthi ezingentla, jonga isikhokelo sethu esipheleleyo kwi Imiboniso bhanyabhanya ezayo nayo yonke Uthotho oluzayo lweMarvel , Eziza kuqinisekisa ukuba awuphosi nto.
Ngezongezo ezininzi ezitsha kwindlela umda wexesha we-MCU unokufumana udaka oluncinci, kodwa zimbini iindlela eziphambili zokubukela iMovie bhanyabhanya ngokulandelelana, ngokulandelelana kwexesha, okukhaba izinto kunye noCaptain America: uMphindezeli wokuQala, okanye Imiboniso bhanyabhanya eMarvel xa ikhutshwa Umyalelo, oqala nge-Iron Man. Xa kuziwa kwiimovie ezimangalisayo zeMarvel ukuze isezantsi ngokwenene kuwe, sithanda ukubona izinto ngokulandelelana kwazo njengoko ziphuhlisiwe ngokwendalo, kodwa uhlala ukhuthaza ukunika ukulandelelana ngokulandelelana kube kanye.
NgeSigaba 4 ngoku siqhubeka kakuhle, ngeWandavision ekhaba izinto, akukho xesha lingcono lokuqalisa. Sifake zonke iinketho zakho ukuze ufumane iMarvel movie marathon binge eqale ngoku.
Oko sikwaziyo Uthotho lweTV yeHawkeye kwiDisney Plus
Uyibukela njani iimovie ezimangalisayo ngokulandelelana: ngokulandelelana kwexesha
Ukujonga uthotho ngokulandelelana, eneneni nguKapteni Melika: uMphindezeli wokuQala osetwe kuqala, okwenzeka ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi apho uSteve Rogers ontsundu aqala ukuthotywa ngeSuper Soldier Serum engakholelekiyo.
Ukungeniswa kwefilimu yamva nje ngokulandelelana kwexesha nguSpider-Man: Kude neKhaya, eyakhutshwa ngo-2019 kodwa ngenxa yokutsiba kwexesha Endgame, kwenzeka kanye ngonyaka we-2023.
Abanye abalandeli bakholelwa ukuba le yeyona ndlela ibalaseleyo yokubukela imovie ye-MCU njengezinto ezaziswa njengabalinganiswa bebali abadibana nazo-umzekelo, le ndlela yenza ukuba uNick Fury's Infinity War weza wanelisa ngakumbi, njengoko ababukeli sele beza kuba nomxholo obonelelwe UCaptain Marvel (ukhutshwe kwii-cinema kunyaka olandelayo).
Nangona kunjalo, kukho amanye amatyala apho oku kuyingozi, njenge-Ant-Man kunye ne-Wasp, ebekwe ikakhulu ngaphambi kweziganeko zeMfazwe engapheliyo, kodwa eyayo i-post-credits yesehlakalo iyonakalisa ukuphela kwe-epic crossover movie.
Nazi iimovie ezimangalisayo ngokulandelelana kokubukela:
UCaptain America: Umphindezeli wokuqala (1942)
UCaptain Marvel (1995)
Indoda yentsimbi (2010)
Indoda yentsimbi 2 (2011)
IHulk eNqabileyo (ngo-2011)
Indoda yentsimbi 3 (2012)
I-Captain America: Ijoni lasebusika (ngo-2014)
Abagcini beGalaxy 2 (2014)
UCaptain America: Imfazwe yamakhaya (2016)
Umhlolokazi Omnyama (2016)
Indoda yesigcawu: Ukuza ekhaya (2016)
Ugqirha Strange (2016-2017)
IBlack Panther (2017)
Abagibeli: Imfazwe engapheliyo (2017)
I-Ant-Man kunye neWasp (2017)
Abagibeli: Umdlalo wokugqibela (2017-2022)
Indoda yesigcawu: Kude nekhaya (2023)
I-Disney Plus esandula ukukhutshwa ibonisa ukuba zombini zenzeka emva kweziganeko ezikude neKhaya, nangona zikhutshiwe ngaphandle komyalelo. I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika yayijolise ukuba ibe luluhlu lokuqala lwe-Marvel ukumiliselwa kwinkonzo, kodwa yafumana ukulibaziseka okukhulu ngenxa yokuphazanyiswa kokufota okubangelwe sisibetho se-COVID-19.
I-WandaVision ikhutshwe kuqala, kodwa kumda wexesha we-MCU, kunokwenzeka ukuba i-Falcon kunye nejoni lasebusika ngokwenene liza kuqala.
ULoki (emva kwe-Endgame, kodwa ngaphandle komda wexesha ophambili-funda ngakumbi kumda wexesha kaLoki)
I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika (2023)
Umbono weWandaVision (2023)
Siza kuhlaziya eli phepha kamva ehlotyeni ngokukhutshwa komhlolokazi omnyama.
Bukela yonke imovie yeMarvel kwiDisney + nge- $ 7.99 ngenyanga kunye ne- $ 79,90 ngonyaka
Ukumangalisa iifilimu ngokulandelelana: ukukhululwa komyalelo womhla
Ukuba ulandelelwano lwamaxesha luvakala ngathi luyabhidisa, kukho ukhetho lokujonga nje ngolungelelwaniso lomhla wokukhutshwa, nokwahlula ngokucocekileyo ibali le-MCU ngokwamanqanaba amane ahlukeneyo.
Izigaba ezithathu zokuqala zenza oko kubizwa ngokuba yi-Infinity Saga, ukuqala ngokungeniswa kwabalinganiswa beAvengers kunye nesiphelo sexesha lomnyhadala we-Avengers: Endgame.
Ukujonga le ndlela kuya kukuthumela kuhambo olufanayo noluye lwathandwa zizigidi zabalandeli beMarvel kwihlabathi liphela, ukuvumela ukuba ubukele kuqala indlela iMCU ekhule ngayo ukusuka kwi-superhero esekwe kumhlaba opera.
Kuyinyani ukuba ukubukela ngale ndlela kuya kuthetha ukuba ubona ezinye zezehlo ezingaphandle komyalelo wendalo iphela, okt imvelaphi yeCaptain America okanye intlanganiso yokuqala phakathi kukaNick Fury noCaptain Marvel, kodwa oku akubangeli naziphi na iingxaki zokubaliswa kwamabali.
Ngomhla wokukhutshwa komhla, i-MCU iqala nge-Iron Man ka-2008 kwaye iyaqhubeka ukuya kuthi ga kwi-2019's Spider-Man: Kude neKhaya, kunye neemovie ezininzi eziza kongezwa kolu luhlu kamva kulo nyaka.
Indoda yentsimbi (ngoMeyi, 2008)
IHulk eNqabileyo (ngoJuni, 2008)
Indoda yentsimbi 2 (ngoMeyi, 2010)
Thor (ngoMeyi, 2011)
UCaptain America: Umphindezeli wokuqala (nge-22 kaJulayi ka-2011)
Abaphindezeli bahlangana (ngoMeyi 4, 2012)
Indoda yentsimbi 3 (ngoMeyi, 2013)
Thor: Ubumnyama beLizwe (ngo-Novemba, 2013)
UCaptain America: Ijoni lasebusika (Epreli, 2014)
Abagcini beGalaxy (Agasti, 2014)
Abaphindezeli: Ubudala be-Ultron (ngoMeyi, 2015)
UAnt-Man (ngoJulayi, 2015)
UCaptain America: Imfazwe yamakhaya (ngoMeyi, 2016)
Ugqirha Strange (ngoNovemba, 2016)
Abagcini beGlass Vol. 2 (UCanzibe, 2017)
Indoda yesigcawu: Ukuza ekhaya (ngoJulayi, 2017)
UTr: Ragnarok (Novemba, 2017)
I-Black Panther (ngoFebruwari, 2018)
Abagibeli: Imfazwe engapheliyo (Epreli, 2018)
I-Ant-Man kunye neWasp (ngoJulayi, 2018)
UCaptain Marvel (Matshi, 2019)
Abagibeli: Umdlalo wokugqibela (Epreli, 2019)
Indoda yesigcawu: Kude nekhaya (ngoJulayi, 2019)
IWandavision (uthotho lweTV)
I-Falcon kunye nejoni lasebusika (uthotho lweTV)
ULoki (uthotho lweTV)
Umhlolokazi Omnyama (nge-9 kaJulayi ka-2021)
I-Shang-Chi kunye neThe Legend of the Ten Rings (nge-3 kaSeptemba 2021)
Ezingunaphakade (nge-5 kaNovemba 2021)
Nksz Marvel (uthotho lweTV)
Hawkeye (uthotho lweTV)
Indoda yesigcawu: Akukho Ndlela yokuKhaya (nge-17 kaDisemba ngo-2021)
Ugqirha Strange kwi-Multiverse of Madness (nge-25 kaMatshi 2022)
Thor: Uthando kunye neNdudumo (nge-6 kaMeyi 2022)
I-Black Panther: iWakanda Ngonaphakade (nge-8 kaJulayi ka-2022)
Iimarvels (nge-11 kaNovemba 2022)
I-Ant-Man kunye neWasp: I-Quantumania (nge-17 kaFebruwari 2023)
Abagcini beGlass Vol. 3 (5 Meyi 2023)
Iimuvi ze-MCU zexesha elizayo kunye nemidlalo yeTV
Blade (Umboniso bhanyabhanya-iTBA)
Ezine ezigqibeleleyo (Umboniso bhanyabhanya-iTBA)
She-Hulk (Umboniso weTV-TBA)
INyanga Knight (Umdlalo weTV-TBA)
Ukungena ngokufihlakeleyo (umboniso weTV-TBA)
I-Ironheart (umboniso weTV-TBA)
Iimfazwe zeAmor (umboniso weTV-TBA)
Uthotho lweWakanda (Umdlalo weTV-TBA)
Imiboniso bhanyabhanya emangazayo kwiDisney Plus
Njengoko iMarvel ingumnini weDisney, ungabukela uninzi lweemovie zeMCU nanini na ufuna xa ungumrhumi wenkonzo yokusasaza studio: Disney ngakumbi.
Oko kwathiwa, kukho iimovie ezimbalwa ezingekhoyo eqongeni ngexesha lokubhalwa, ngakumbi i-Incredible Hulk (njengoko ingumnini weUniversal) kunye nooTom Holland bhanyabhanya weSpider-Man bhanyabhanya (njengoko zazenziwe ngokubambisana neSony Pictures).
Ngethamsanqa, i-Incredible Hulk iyafumaneka ukurenta kwiAmazon ukusuka kwi- £ 2.49 nje, ngelixa Indoda yesigcawu: Ukuza ekhaya kwaye Ukude neKhaya ziyafumaneka ukuthenga ngamanani.
Ukwanazo nezinye uthotho lweTV oluza kwiDisney Plus. Mhlawumbi sele ubukele iWandaVision kunye neFalcon kunye neWinter Solider, kwaye uLoki uqalile nje.
Njengolu luhlu, siza kunyuka:
Kuthekani ukuba?… (Nge-11 Agasti 2021)
UNks Marvel (ngasekupheleni kuka-2021)
Hawkeye (ngasekupheleni kuka-2021)
INyanga Knight (TBA)
Ukungena ngokufihlakeleyo (TBA)
Uthotho lweWakanda (TBA)
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokubukela imovie kaMarvel ngokulandelelana?
Disney / Ukumangaliswa
Ngelixa ukhetho lolwakho ngokupheleleyo, singacebisa ukuba ubukele nje ngokulandelelana kwe-ol-yokukhululwa - yindlela eya kwenziwa ngayo iifilimu kwaye, ekugqibeleni, indlela ezijongwa ngayo…. ubuncinci ukuba uyi-newbie ye-MCU, enezigcawu zasemva kwekhredithi, amaqanda e-Ista kunye nokunye konke okwenza eyona ngqondo ibonwa ngolu hlobo.
Singacebisa ngokuchasene nokulandelelana kwexesha ukuba ungumntu omtsha ngokupheleleyo kwiMarvel Cinematic Universe. Ngelixa le ndlela ivakala inomdla kwithiyori, kukho izizathu ezininzi zokuba inokuthintela amava akho e-MCU.
Okokuqala: unokuba nzima ukukhumbula imvelaphi yabalinganiswa abathile. UCaptain Marvel, umzekelo, uya kwaziswa kwifilimu yesibini kuluhlu, kodwa ayizukukhankanywa kwakhona kude kube ngaphezulu kweeyure ezingama-40 emva koko.
Kwakhona ukwenza uKapteni Marvel kwimuvi yakho yesibini ye-MCU kuthetha ukuba uphoswa ziiqhulo kunye nezalathiso esekwe ngaphezulu kwamangenelo ali-17 angaphambili.
Nangona kunjalo, kunento ekufuneka ithethwe ngabalandeli beMarvel abanenzondelelo abaphinda baphinde baphinde balandele isaga ngokokulandelelana kwayo, njengoko oku kuya kunika ubunzulu ngakumbi kumqolo wabalinganiswa abaphambili kwaye kuzise ukuqonda okutsha kwamaxesha e-MCU (umzekelo, uninzi aluqondi ukuba abagcini I-Galaxy Vol 1 kunye ne-2 zibekwe ziinyanga nje ngokwahlukeneyo).
Ungayibukela njani yonke ifayile ye- Iimuvi ezandisiweyo ze-DC ezandisiweyo ngokulandelelana
Yonke i Imiboniso bhanyabhanya ezayo
Eyona miboniso bhanyabhanya imnandi
Enye into enokukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi iodolo yokubukela imovie ye-Marvel Cinematic Universe ngamanqaku abo okuphononongwa, ahluka kancinci kule minyaka idlulileyo.
Sibeke i-franchise engezantsi ngokwamanqaku abo e-IMDb, kugqitywe ngokuvumelana kwenani elikhulu labalandeli, kwaye ayothusi into yokubona iifilimu ezimbini zakutshanje zeAvenger ziphuma phambili.
Abagibeli: Umdlalo wokugqibela (amanqaku e-IMDb: 8.4)
Abaphindezeli: iMfazwe engapheliyo (amanqaku e-IMDb: 8.4)
Abagcini beGalaxy (amanqaku e-IMDb: 8)
Abaphindezeli bahlangana (amanqaku e-IMDb: 8)
Indoda yentsimbi (inqaku le-IMDb: 7.9)
UTr: Ragnarok (amanqaku e-IMDb: 7.9)
UCaptain America: Imfazwe yamakhaya (inqaku le-IMD: 7.8)
UCaptain America: Ijoni lasebusika (amanqaku e-IMDb: 7.7)
Abagcini beGalaxy: Vol. 2 (inqaku le-IMDb: 7.6)
Indoda yesigcawu: Kude nekhaya (amanqaku e-IMDb: 7.5)
Ugqirha Strange (inqaku le-IMDb: 7.5)
Indoda yesigcawu: Ukuza ekhaya (inqaku le-IMD: 7.4)
I-Black Panther (inqaku le-IMDb: 7.3)
Abaphindezeli: Ubudala be-Ultron (amanqaku e-IMDb: 7.3)
Umntu-woMntu (inqaku le-IMDb: 7.3)
Indoda yentsimbi 3 (inqaku le-IMDb: 7.2)
I-Ant-Man kunye neWasp (inqaku le-IMDb: 7.1)
Umhlolokazi Omnyama (amanqaku e-IMDb: 7)
Thor (inqaku le-IMDb: 7)
Indoda yentsimbi 2 (inqaku le-IMDb: 7)
UCaptain Marvel (amanqaku e-IMDb: 6.9)
UCaptain America: Umphindezeli wokuqala (inqaku le-IMDb: 6.9)
Thor: Ihlabathi elimnyama (inqaku le-IMDb: 6.9)
I-Incredible Hulk (amanqaku e-IMDb: 6.7)
Ungazikhuphela njani kwaye ubukele iMovie bhanyabhanya
Njengoko sibekile apha ngasentla, uninzi lweemovie zeMarvel ziyafumaneka ukusasaza kwiDisney Plus. Nangona kunjalo, unokukhuphela iifilimu kwinkonzo ukuze ubukele usendleleni. Nantsi inyathelo lakho ngenyathelo ngenyathelo.
Vula usetyenziso lwakho lweDisney Plus (jonga indlela yokukhuphela apha).
Kwiskrini sasekhaya, khangela ifilimu ofuna ukuyikhuphela kwisixhobo sakho.
Cofa kwi icon yotolo lokukhuphela kwimenyu esezantsi yeapp yeDisney Plus.
Ukubona nokubukela izihloko zakho ezikhutshelweyo, ndwendwela indawo yokuKhuphela kwimenyu esezantsi yosetyenziso.
Unokuzikhuphelela kwinani elingenamda leemovie kwiDisney Plus usetyenziso lweselfowuni. Imiboniso yakho ekhutshelweyo iya kuba nakho ukubukela ixesha elide njengokuba ubhalisile kwinkonzo.
Unako kwakhona Thenga, urente kwaye ukhuphele imovie nganye yeMarvel kwiAmazon (awudingi ukuba ngumthengi oyintloko kwiAmazon ukwenza oku).
Ukucinga ukuba yintoni enye onokuyibuka kwiDisney Plus? Jonga okusemandleni ethu Uthotho lweDisney Plus Isikhokelo okanye iimuvi ezilungileyo zeDisney Plus.
Iimuvi ezizayo zeMCU kunye nemiboniso
Siza kuhlaziya eli phepha njengeemovie ezintsha kunye nemiboniso eyongezwa kwiDisney + nakwinqanaba lesi-4 lexesha le-MCU, kodwa, okwangoku, siqokelele uluhlu lwakho lokugqibela malunga nento ekufuneka ujonge kuyo ngomhla wokukhutshwa:
Ungathini ukuba…? (Nge-11 ka-Agasti 2021)
UNksk Marvel (emva ko-2021)
Hawkeye (emva ko-2021)
INyanga yeNyanga (2022)
Abagcini beGreen Holiday Special (iKrisimesi ka-2022)
Ezine ezigqibeleleyo (TBA)
Uthotho lweWakanda olungenasihloko (TBA)
Ungasayina ungene kwiDisney Plus nge-7.99 ngenyanga okanye ngentlawulo engaphambili ye- $ 79.90 yonyaka opheleleyo.
Jonga ngakumbi ukubonwa kweemovie zethu okanye undwendwele isikhokelo sethu seTV ukubona ukuba yintoni le ngokuhlwanje.
ixesha flash 6 ukukhululwa umhla uk
uphakathi ubulala ukufa ngokucenga
jonga ubukhulu bayo kwi-intanethi
yintoni ijelo isibhakabhaka atlantic kwi virgin
ingelosi amanani 8888
amazon jack ryan isizini 3